Iincwadana ezi-5 zenoveli emnyama. Knox, Fitzek, Banalec, Bagstam kunye noHarper | Uncwadi lwangoku
Ukuqala julio. Ihlobo elipheleleyo, Amaza obushushu esihogo. Eyona ndawo ilunge ngakumbi ye- ulwaphulo-mthetho, nangona kungcono ukufunda ngayo. Uhlobo lwabalandeli luhlala luxabisa iindaba. Nazi ezi zenyanga nganye. Sinefani entsha ngalo lonke ixesha ezakudala ngakumbi njengaye Bannalec okanye uFitzek kunye nababhali isityhilelo njengebritish Knox kunye noHarper kunye neSwedish Bagstam.
1 Ityala leNqaba yeComper- uJean-Luc Bannalec
2 Ubusuku besibhozo - uSebastian Fitzek
3 Uncumo olubulalayo- uJoseph Knox
4 Ubungqina obubulalayo-uAnna Bågstam
5 Indalo yasendle - uJane Harper
Ityala lenqaba yeComper -UJean-Luc Bannalec
UJörg Bonn ligama lokwenyani elisemva kwe- isibizo lo mbhali usayina kunye naye imisebenzi yakhe Alemán ohlala phakathi kwelizwe lakhe lokuzalwa kunye neFrance Brittany. Yiyo loo nto isidalwa sayo esidumileyo Umkomishinala weGallic, uGeorges Dupin. Le yeyakhe Ityala lesixhenxe usete kwakhona kwihlathi laseBrittany.
Silapha ngasekupheleni kwehlobo kunye nothotho lwe ukubulala yabanye abadala iingcali kwimbali ka-King Arthur ukhokelela uMkomishinala uDupin kunye neqela lakhe labasebenzisanayo kwihlathi le Broceliande. Ukusuka kwinto abayithethayo apho, loo mhlaba weenqaba zamandulo kunye nezithethe zamandulo ngu Fairyland yokugqibela yintoni esehlabathini. Umbuzo ke ngulo, yintoni abayaziyo oososayensi malunga nokumbiwa kwakutsha nje ehlathini kwaye kutheni bengavumi ukuthetha?
Ubusuku besibhozo -USebastian Fitzek
Okunye Umbhali odumileyo waseJamani Ngubani ohamba phambili kwiitshathi zentengiso kwelo lizwe nguSebastian Fitzek. Esi siphakamiso sitsha sesokuba okhuphiswano olukhethekileyo kakhulu apho umntu ngamnye othathe inxaxheba abhale khona igama ephepheni. Kodwa kuyakubakho omnye kuphela onyuliweyo kwaye ngobo busuku i ophumeleleyo awuyi kukhuselwa ngumthetho: wonke umntu angambulala ngaphandle kokufumana isohlwayo. Ukongeza, umbulali uthatha umvuzo wezigidi ezilishumi zeerandi. Umbuzo kukucinga ukuba nguwe okhethiweyo.
Uncumo olubulalayo -UJoseph Knox
Lo mbhali oliNgesi wayene Ityala elikhulu nge IiSirenas, apho wasazisa ngomphenyi onesiphithiphithi ovela eManchester U-Aidan uyalinda. Ubuyele emsebenzini ayosebenza ebusuku kwaye umnxeba umkhokelela kwiPalace Hotel, isakhiwo esidala esele sishiyiwe. Kukho ifayile ye- isidumbu sendoda: Basike zonke iilebhile zeempahla kwaye, ukongeza, Kubonakala ngathi uncumile.
Ukulinda kuye kwangenelela kwi- ityala lezesondo kwaye uzuze intatheli ye-alt-ilungelo lentatheli. Umcuphi uya kuzama ukufumanisa ukuba Ubume yendoda enoncumo olubulalayo, kodwa ayazi ukuba kukho umntu obuzisa kweyakhe.
Ubungqina obubulalayo -U-Anna Bågstam
U-Anna waseSweden Bagstam iye yaba into entsha yeshumi elinesihlanu yenoveli yolwaphulo-mthetho yaseNordic. Ukulandela indlela ephumeleleyo ye- kwilali yabasetyhini kunye nelali ebonakala ngathi ayihambi apho ulwaphulo-mthetho olothusayo luguqula yonke into luyijongise ezantsi, luye lwaqingqa umngxuma ngaphezulu.
Isisa kulondawo, lerviken, ilali efanelekileyo yokuloba kunxweme lweBaltic apho ubuyela khona UHaretet Vesterberg ukusebenza ne amapolisa endawo kwaye esondele kuyise ogulayo. Phantse ngaxeshanye umzimba we ULaura andersson wagwazwa kabuhlungu kwaye amehlo akhe avulekile, ancanyathiselwe phezulu.
Xa uHarriet eqala ukuphanda uyakuqonda ukuba buxoki ngeenxa zonke ityala ngakumbi nangakumbi. Kwaye kunokwenzeka ukuba umbulali ngumntu amaziyo.
Indalo yasendle -UJane Harper
UHarper ufumene impumelelo enkulu ngamazwe nge Unyaka wembalela , kwaye ngoku ubuyile ngeli bali linokukrokra elibekwe kwi amahlathi ase-Australia.
Umlinganiswa ophambili ngu Ummeli we-Federal uAaron Falk, ebuyela kuyo Melbourne emva kokuhlala nzima kwidolophu yakowabo. Uphanda ityala le- ukurhwaphiliza imali kumgangatho omkhulu kwaye ifunda nge ukunyamalala kukaAlice Russell, ubungqina obuphambili kuye. U-Alice wayesezinzulwini zehlathi lase-Australia, apho wayethatha inxaxheba kwindawo ephumayo. Wayethatha inxaxheba kwimisebenzi eyayisenzeka kuloo ndawo ingenabuntu.
UFalk kuya kufuneka angene kuloo mmandla kwaye uya kufumanisa ukuba uAlice wayenjalo Umfazi okhohlakeleyo ongenaluvelwano ukuba wenze iintshaba ezininzi koogxa bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Iinoveli ezi-5 zenoveli emnyama. Knox, Fitzek, Banalec, Bagstam kunye noHarper